Ciidanka Asluubta Soomaliyeed oo Soo bandhigey dhoola tus ay ku soo dhaweynayaan sanad guurada aas-aska ciidanka Asluubta | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Ciidanka Asluubta Soomaliyeed oo Soo bandhigey dhoola tus ay ku soo dhaweynayaan...
Ciidanka Asluubta Soomaliyeed oo Soo bandhigey dhoola tus ay ku soo dhaweynayaan sanad guurada aas-aska ciidanka Asluubta
Ciidamada Asluubta Soomaaliyeed ayaa ku jira diyaar garoowgii ugu dambeyay ay ugu dabaaldagayaan munaasabada Aasaska ciidanka asluubta oo ku beegan 22 fabraayo.
ciidmada ayaa wax ay soo bandhigeen cududooda malatari waxaana ka soo qeebgalay Wasiirka Cadaalada Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaaji iyo taliyaha Ciidanka Asluubta soomaaliyeed S/Gaas Xuseen Xasan Cismaan.
Wasiirka Cadaalada iyo taliyaha ciidanka asluubta ayaa waxaay salaan sharaf ay ka qateen cutubyo ka tirsan ciidamada asluubta soomaliyeed.
Taliyaha Ciidanka Asluubta soomaaliyeed S/Gaas Xuseen Xasan Cismaan ayaa boogadaiyay Ciidamda isagoo sheegay in maalinta Qamiista oo ay ku beegantahay 22 fabraayo ay dhicidoonto munaasabada Aaska Ciidanka Asluubta 48 sano guuradii ka soo wareegtey markii la aas-aasay Ciidanka Asluubta.
Wasiirka Cadaalada Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaaji ayaa sheegay in talabo wanagsan ay tahey in ciidamada Asluubta u diyaar garoowaan Munaasabadooda isagoo sheegay ciidanku ay waxyaabaha ay soo bandhigeen ay hor mar u tahey ciidanka asluubta
Previous articleMuwadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibanaa Dalka Liibiya oo Maanta lagu wado in dib logu soo celiyo Magaalada Muqdisho
Next articleDowlada Qadar oo Gawaari ku wareejisey Dowllada Soomaaliya